လမ်းလျှောက်နှေးတာက မြန်မြန်အိုစေနိုင်ပါသတဲ့ - Page 27 of 40 - Hello Sayarwon
လမ်းလျှောက် ရင် ဘယ်လိုလျှောက်လေ့ရှိလဲ……. ခပ်မြန်မြန်လား …… ခပ်နှေးနှေးလား ……. ခပ်မြန်မြန်လျှောက်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်က အရွယ်တင်ကျန်းမာမယ့် သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲလမ်းကို ခပ်နှေးနှေးပဲ လျှောက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုကစပြီး လမ်းကို ခပ်မြန်မြန်လျှောက်ဖို့သာ ပြင်ထားပေတော့။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်မှာ လမ်းကို ခပ်နှေးနှေးပဲလျှောက်တတ်သူတွေက အရွယ်မတိုင်ခင်မှာ အိုမင်းနိုင်ခြေပိုများနေပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော သိမြင်မှုစွမ်းရည်ဆိုင်ရာ မှာရောပေါ့၊ လို့ လေ့လာမှုအသစ်တစ်ရပ်အရ သိရပါတယ်။
လမ်းလျှောက်တဲ့ အမြန်နှုန်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ သက်တမ်းကို ခန့်မှန်းနိုင်သလို ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုလည်း ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုအသစ်တစ်ရပ်ရဲ့ ရလဒ်အရ လမ်းမြန်မြန်လျှောက်တတ်သူတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတဲ့အခါ ပိုကျန်းမာကြသလို အသက်လည်း ပိုရှည်ကြတယ်၊ လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
လေ့လာမှုအတွင်း သုတေသီတွေဟာ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်ရှိသူတွရဲ့ လမ်းလျှောက်တဲ့အမြန်နှုန်းကို လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုအတွင်း သုတေသီတွေက သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်မှာ လမ်းကို မြန်မြန်လျှောက်တတ်တာလား၊ ဘယ်လိုမျိုးလမ်းလျှောက်လေ့ရှိလဲ ဆိုတာကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုအတွင်းမှာ လူဦးရေ ၉၀၄ ဦးကို လေ့လာခဲ့တာပါ။
လမ်းလျှောက်တဲ့ အမြန်နှုန်း နဲ့ သိမြင်မှုစွမ်းရည်၊ ကျန်းမာရေးတို့ကြားက ဆက်စပ်မှု
၃ နှစ်ကြာ လေ့လာခဲ့မှုရဲ့ ရလဒ်အရ သိရတာက သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်မှာ ပုံမှန်ထက် ခပ်မြန်မြန် လမ်းလျှောက်တတ်သူတွေက လမ်းကို ခပ်နှေးနှေးလျှောက်တတ်သူတွေထက် အရွယ်တင်ကျန်းမာကြသလို သိမြင်မှုစွမ်းရည်လည်း ပိုကောင်းကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လေ့လာမှုရလဒ်အရ သိရတာက ကလေးဘဝကတည်းက လမ်းကို ခပ်မြန်မြန်လျှောက်တတ်သူတွေဟာ ဘာသာစကားစွမ်းရည်၊ လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း နဲ့ အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေက အခြားသူတွေထက် ပိုကောင်းနေတတ်ကြပါတယ်။
ဒါတွေတင်မကသေးပါဘူး။ သူတို့ဟာ IQ လည်းမြင့်ကြသလို ကာလတိုမှတ်ဉာဏ်လည်းကောင်းတတ်ကြပါတယ်။ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းမြင့်ကြသလို အရာရာကို အကောင်းဆုံး သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိသူတွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းနိုင်ကြသလို လက်နဲ့မျက်လုံးလှုပ်ရှားမှုကိုလည်း ဟန်ချက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။
လေ့လာမှုမှာပါဝင်သူတွေရဲ့ BMI၊ ခါး နဲ့ တင်ပါး အချိုးအစား၊ သွေးပေါင်ချိန်၊ နှလုံးကျန်းမာရေး၊ သွေးတွင်းကိုလက်စထရော၊ သွေးတွင်းအဆီဓာတ်၊ သွေးဖြူဥဆဲလ် အရေအတွက်၊ ယူရစ်အက်ဆစ်ပမာဏ၊ သွား နဲ့ သွားဖုံးကျန်းမာရေးတွေကိုပါ လေ့လာခဲ့တာပါ။ ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကိုလည်း MRI scans အသုံးပြုပြီး စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကိုလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။
လမ်းလျှောက်နှေးတာက မြန်မြန်အိုစေနိုင်သလို ကျန်းမာရေးကိုလည်း ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသတဲ့
MRI scans ရလဒ်အရ လမ်းလျှောက်နှေးသူတွေဟာ ဦးနှောက်အရွယ်အစား သေးကြသလို အာရုံကြော ဖွံ့ဖြိုးမှုကလည်း အားနည်းတတ်ကြပြီး အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းကြသူတွေပါ။ နောက်တစ်ချက်က လမ်းလျှောက်နှေးတာက နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး၊ ကိုယ်ခံအား နဲ့ သွားနဲ့ သွားဖုံးကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ခြေက လမ်းလျှောက်မြန်သူတွေထက် ပိုများကြပါတယ်။
ကလေးဘဝကတည်းက လမ်းကို အေးအေးဆေးဆေးလျှောက်တတ်သူတွေဟာ ဘာသာစကားစွမ်းရည်၊ လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်တွေကိ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း နဲ့ အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေက အခြားသူတွေထက် ပိုအားနည်းနေတတ်ကြပြီး အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းနိုင်ခြေကလည်း များနေကြပါတယ်။
လမ်းလျှောက်နှေးသူတွေဟာ အသက် ၇၀ ဒါမှမဟုတ် အသက် ၈၀ လောက်ရောက်တဲ့အခါ ရွယ်တူတွေထဲမှာ ခပ်စောစော သေဆုံးတတ်ကြပါတယ်၊ လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသက်ရှည်ကျန်းမာပြီး အရွယ်တင်လှပစေဖို့ဆိုရင် လမ်းကို ခပ်မြန်မြန်လေးလျှောက်ပေးဖို့လိုပါမယ်။
Slow walking speed in midlife linked with faster aging https://www.medicalnewstoday.com/articles/326648 Accessed Date 24 February 2020
Your Walking Speed Can Tell You How Fast You’re Aging https://www.health.com/fitness/walking-speed-premature-aging Accessed Date 24 February 2020